Frozen keyboard что за приложение
— Custom support theme
—2in 1 keyboard (2 layout in one keyboard)
— Auto Detect Keyboard
— Unicode to Zawgyi Converter
— Copy clipboard Converter
— Support Myanmar (Unicode, Zawgyi) and English
— Long press typing
— Beautiful emoji
— Theme store
— Keyboard size and font adjustment
— Font style changer
— Easily theme share with QR Code
«Frozen Keyboard ကိုအရိုးရှင်းဆုံး ကီးဘုတ်ဒီဇိုင်း နဲ့ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး Android Version 4.0 အထက်မည့်သည့်ဖုန်းတွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ယူနီကုဒ်၊ ဇော်ဂျီ၊ အင်္ဂလိပ် ကီးဘုတ်လက်ကွက်ကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီး ကီးဘုတ် ထည့်သွင်းခြင်းကိုလည်း Application ထဲမှာတင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် အသတ်တွေ၊ နှစ်လုံးဆင့် အက္ခရာတွေကိုလည်း Long press ဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူရိုက်နိုင်ပါသည်။
Frozen Keyboard ဟာဆိုရင် ပိုမိုလျှင်မြန်ပြီး သုံးစွဲရလွယ်ကူလာတဲ့ ကီးဘုတ်ဖြစ်လာသည့်အပြင် Emoji ဒီဇိုင်း 3000 ကျော်နှင့် ကီးဘုတ် size ၊ font size တွေကို စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိုနိုင်ပါပြီး။ ကီးဘုတ်အနိမ့်အမြင့်ကိုလည်း Setting ထဲမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ Keyboard Background နဲ့ Key Color တွေကိုလည်း မိမိစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါပြီ။ ယခုဆိုလျှင် မိမိ Gallery ရှိနေတဲ့ ပုံမှန်သမျှက သင့်ရဲ့ Keyboard Background အဖြစ်ပြောင်းလဲနုိုင်ပါပြီ။ အသစ်သစ်နဲ့လန်းနိုင်ဖို့ အခုဘဲ Frozen Keyboard ကို Download လုပ်ထားရအောင်»
— မိမိစိတ်ကြိုက် ကီးဘုတ်နောက်ခံကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
— ကီးဘုတ် လက်ကွက်အဟောင်းနဲ့ အသစ်ကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
— ဖုန်းရဲ့ Font ပေါ်မှုတည်ပြီး Auto လက်ကွက်ရွေးချယ်ပေးခြင်း
— ယူနီကုဒ် to ဇော်ဂျီ conveter ပါဝင်လာခြင်း
— ဖတ်လို့မရတဲ့ ဇော်ဂျီ or ယူနီကုဒ်များကို Copy ကူး၊ Convert လုပ်ပြီးဖတ်လို့ရခြင်း
— ရှင်းလင်းပြီး စာရိုက်လို့ ကောင်းမွန်တဲ့ လက်ကွက်ပုံစံကို တည်ဆောက်ထားခြင်း
— မြန်မာစာလုံးအသတ်တွေ၊နှစ်လုံးဆင့်တွေကို Long press နှိပ်ပြီးအလွယ်တကူ ရိုက်နှိပ်နိုင်ခြင်း
— များပြားလှပတဲ့ Emoji icon အသစ်များ ပါဝင်ခြင်း
— ကီးဘုတ် theme မျိုးစုံကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း
— ကီးဘုတ် size ၊ font size ကို စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိုနိုင်ခြင်း
— Font changer ပါဝင်လာခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်
— သူငယ်ချင်းတွေစီကိုလဲ keyboard theme တွေကို အလွယ်တကူ QR နည်းပညာဖြင့် share လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Frozen Keyboard поможет вам печатать быстрее, проще и более 3000 смайликов, пользовательский размер клавиатуры, размер шрифта клавиатуры и чудо-темы клавиатуры. Вы можете выбрать «Замороженная клавиатура» с двумя типами раскладок клавиатуры: «Новая раскладка клавиатуры» и «Старая раскладка клавиатуры».
Пользователь Myanmar Keyboard может легко набрать Unicode в Myanmar с помощью Frozen Keyboard. Frozen Keyboard совместима с Zawgyi Font, Pyidaungsu Font, Unicode Font и популярна в ИТ-сообществе Мьянмы как Unicode Keyboard, бирманская клавиатура, Zawgyi Keyboard, лучшая клавиатура Мьянмы, очень простой и лучший дизайн макета.
Настройка темы: вы можете выбрать любую из картинок из вашей галереи и создать лучшую тему с вашим собственным дизайном. Вы также можете изменить цвет клавиши шрифта и цвет функциональной клавиши.
«Нет сомнений в том, что Frozen Keyboard доставит вам удовольствие; почему бы не скачать сейчас! »
*** Особенности программного обеспечения ***
— Пользовательская тема поддержки
— клавиатура2в 1 (2 раскладки на одной клавиатуре)
— Автоопределение клавиатуры
— Конвертер Unicode в Zawgyi
— Конвертер буфера обмена
— Поддержка Мьянмы (Unicode, Zawgyi) и английского языка
— Долгое нажатие
— Красивые смайлики
— Тематический магазин
— Размер клавиатуры и настройка шрифта
— Переключатель стиля шрифта
— Легко поделиться темой с QR-кодом
«Замороженный клавиатура ကို အရိုး ရှင်း ဆုံး ကီးဘုတ် ဒီဇိုင်း နဲ့ အလွယ်တကူ အသုံးပြု နိုင်အောင် ထုတ်လုပ် ထားပြီး Android версии 4.0 အထက် မည့် သည့် ဖုန်း တွင် မ ဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်. ယူနီကုဒ်, ဇော်ဂျီ, အင်္ဂလိပ် ကီးဘုတ် လက်ကွက် ကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင် ပြီး ကီးဘုတ် ထည့် သွင်း ခြင်း ကိုလည်း Применение ထဲမှာ တင် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်. ဒါ့အပြင် အ သတ် တွေ, နှစ်လုံး ဆင့် အက္ခရာ တွေကိုလည်း Длительное нажатие ဖြင့် လွယ်ွယ်ကူ ကူ ရိုက် နိုင်ပါသည်.
Замороженная клавиатура Emoji ဆိုရင် 3000 ကျော် လျှင် ကီးဘုတ် ပြီး အပြင် အပြင် အပြင် အပြင် အပြင် အပြင် အပြင် размер шрифта တွေကို စိတ်ကြိုက် ချိန် ညှို နိုင် ပါ ပြီး။ ကိုလည်း အ နိ မ့်အ မြင့် ကိုလည်း Настройка ကိုလည်း မိမိစိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။ Фон клавиатуры နဲ့ Цвет клавиш တွေကိုလည်း မိမိစိတ်ကြိုက် ပြုပြင် နိုင် ပါပြီ။ မိမိ မိမိ Галерея ရှိနေတဲ့ ပုံ မှန်သမျှ က သင့် ရဲ့ Фон клавиатуры အဖြစ် ပြောင်းလဲ နုိုင် ပါပြီ။ ဘဲ သစ်သစ် နဲ့ လန်း နိုင်ဖို့ အခု ဘဲ Frozen Keyboard ကို Download လုပ်ထား ရအောင် «
ပါဝင်တဲ့ особенность များ
— မိမိစိတ်ကြိုက် ကီးဘုတ် နောက်ခံ ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင် ခြင်း
— ကီးဘုတ် လက်ကွက် အဟောင်း နဲ့ အသစ်ကို စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင် ခြင်း
— ဖုန်း ရဲ့ Шрифт ပေါ် မှု တည်ပြီး Авто လက်ကွက် ရွေးချယ် ပေးခြင်း
— ယူနီကုဒ် to ဇော်ဂျီ конвектор ပါဝင်လာ ခြင်း
— ဖတ်လို့ မရတဲ့ ဇော်ဂျီ или များကို များကို Копировать ကူး၊ Конвертировать လုပ်ပြီး ဖတ်လို့ ရခြင်း
— ရှင်းလင်း ပြီး စာ ရိုက်လို့ ကောင်းမွန်တဲ့ လက်ကွက်ပုံစံ ကို တည်ဆောက် ထားခြင်း
— တွေကို လုံး အ သတ် တွေ၊ နှစ်လုံး ဆင့် တွေကို Длительное нажатие နှိပ်ပြီး အလွယ်တကူ ရိုက် နှိပ် နိုင်ခြင်း
— လှပတဲ့ လှပတဲ့ Эмодзи значок အသစ်များ ပါဝင်ခြင်း
— ကီးဘုတ် тема မျိုးစုံကို စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ နိုင်ခြင်း
— ကီးဘုတ် размер၊ размер шрифта ကို စိတ်ကြိုက် ချိန် ညှို နိုင်ခြင်း
— Переключатель шрифтов ပါဝင်လာ ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်
— လဲ စီ ကို လဲ тема клавиатуры အလွယ်တကူ အလွယ်တကူ QR နည်းပညာ ဖြင့် поделиться လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Have your often-used information right at your fingertips!
Hate entering your 48 character long e-mail address all the time? Or the «Goodbye, hope you are doing well. Talk soon.»? Or maybe you just forgetalot of information, like your passwords?
Then Phraser is the Keyboard you need!
Quickly enter the information you want to save for later. Easily switch to the keyboard just like you switch to your Emojis. Insert!
Perfect for places like TikTok and Jodel where its great to have that perfect caption right at your fingertips and ready to be pasted.
There is no limit to what you can paste or how many things you can store.
Phraser uses local storage to store data saved for the keyboard to use.
The keyboard therefore has no internet access.
If the App is deleted, the data will be deleted too.
You are free to store any passwords, but they are not protected in any way.
Some text fields might be protected, such as password fields, in which Phraser and any other third party keyboards will automatically be deactivated by the system.
в каком приложении можно обрезать фото по контуру в мобильном телефоне
11 мобильных приложений для редактирования фотографий с функцией «вырезать–вставить» С распространением
замена лица на видео приложение для iphone
Reface: Face Swap Videos 12+ Funny Changer App: Morph Faces NEOCORTEXT, INC. iPhone Screenshots Description